कल्याणकारी पूरक सामग्रीको निर्माणकर्ता - विस्पाउडर BLOG
म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट भनेको के हो? म्याग्नेशियम एल-थ्रोनेट (778571 57--6--XNUMX) आज बजारमा म्याग्नेशियम गोलीको सबैभन्दा शोषक रूपको रूपमा बाहिर खडा छ। म्याग्नेशियम एक सामान्य खनिज हो जुन भित्र उपस्थित हुन सक्छ [...]
हामीलाई किन निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) चाहिन्छ यद्यपि बुढ्यौली अपरिहार्य छ, तैपनि प्रक्रियालाई उल्टाउने सम्भावनाहरू छन्, धन्यवाद निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN)। पाकेको बुढेसकालमा बाँच्नु सबैको सपना हो [...]
ग्लाइसीन प्रोपियोनिल-एल-कार्निटाइन (GPLC) के हो ग्लाइसीन प्रोपियानिल-एल-कार्निटाइनले आणविक रूपमा बोन्डेड प्रोपोनिल-एल-कार्निटाइन र एमिनो एसिड ग्लाइसिनलाई जनाउँछ। यो एकै प्रकारको परिवारमा वर्गीकृत गरिएको छ कार्निटाइनमा [...]
Pterostilbene Vs Resveratrol तुलना गर्दा, तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि त्यहाँ धेरै तथ्यहरू छन् जुन तपाईं दुईको बारेमा छुटेको छ। स्वस्थ जीवन बिताउनको लागि तपाइँले टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ [...]
Oleoylethanolamide (OEA) के हो? Oleoylethanolamide (OEA) वजन, कोलेस्ट्रॉल, र भूख को एक प्राकृतिक नियामक हो। मेटाबोलिट साना आंतहरूमा थोरै मात्रामा संश्लेषित हुन्छ। प्राकृतिक अणु जिम्मेवार छ [...]
त्यहाँका लाखौं व्यक्ति निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड जस्ता एन्टी-एजिंग उत्पादनहरूमा यति धेरै पैसा खर्च गर्छन्। जे होस् बुढेसकाल एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, व्यक्तिहरू केवल बुढो देखिन चाहँदैनन्। [...]
रेड खमीर चामल एक्स्ट्र्याक्ट के हो रातो खमीर चामल एक्स्ट्र्याक्ट (RYRE) बनाइएको हुन्छ जब मोनास्कस पर्प्यूरस भनेर चिनिने खास प्रकारको मोल्ड चामललाई चामल किन्छ। चामल गाढा रातो भयो [...]
कालो लसुन निकाल्ने स्वास्थ्य लाभ र अनुप्रयोग
कालो लसुन निकास के हो? कालो लसुन निकाल्ने लसुनको एक रूप हो जुन ताजा लसुनको किण्वन र बुढोबाट उत्पन्न भएको हो। ताजा लसुन को उपचार [...]
आनन्दममीड (AEA): सबै कुरा तपाईको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
आनंदमाइड (AEA) के हो? नाम आनंदमीदे (AEA) शब्द आनंद भन्ने शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ यसले आनन्द दिन्छ। यो एक एन्डोकानाबिनोइड हो जुन फ्याटी एसिड एमाइड समूहमा भिन्न छ। संरचनात्मक, [...]
ग्लुटाथियोनले एन्टिऑक्सिडन्टको रूपमा काम गरेर जीवित जीवहरूलाई थुप्रै तरिकामा फाइदा पु .्याउँछ। यो प्रत्येक मानव कोषमा उपस्थित अमीनो एसिड यौगिक हो। प्रत्येक जीवित जीवको शरीरमा ग्लुटाथियोन हुन्छ। [...]
११ स्वास्थ्य लाभ रेजेराट्रोल पूरकहरूको
Resveratrol के हो? रिसवेराट्रोल एक प्राकृतिक पोलीफेनल प्लान्ट कम्पाउन्ड हो जुन एन्टिऑक्सिडन्टको रूपमा कार्य गर्दछ। रेजेराट्रोल स्रोतहरूले रातो वाइन, अंगूर, जामुन, बदाम, र गाढा चकलेट समावेश गर्दछ। यो कम्पाउन्ड उच्च देखिन्छ [...]
क्वरेसेटिनको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
क्वेरसेटिन भनेको के हो? क्वेरेसेटिन (११117--39-)) फ्लेभोनोइड्स भनिने यौगिकहरूको समूहसँग सम्बन्धित छ। यसको रासायनिक नाम 5, ′ ′, ′ ′, ,,3-पेन्टाहाइड्रोक्सीफ्लाभोन हो। यो एक रंजक हो जुन स्वाभाविक रूपमा धेरै तरकारीहरू, फलफूलहरूमा अवस्थित हुन्छ। [...]